Nguwuphi umahluko phakathi kweenkampani zoyilo lwebranti kunye neearhente zentengiso?
Ukuprintwa kwe-UV luhlobo lokuprinta kwedijithali olusebenzisa izibane ze-ultra-violet ukomisa okanye ukunyanga inki njengoko iprintiwe. Njengoko umshicileli esasaza i-inki phezu kwezinto (ezibizwa ngokuba yi "substrate"), izibane ze-UV eziyilwe ngokukodwa zilandela ngasemva, ziphilisa-okanye zomisa-inki i ...
I-Banner ye-PE engeyiyo i-PVC
Izinto zokuprinta eziluhlaza-5M ububanzi PE Banner NON PVC 5M ububanzi, inokuprintwa yi-Eco-solvent, Solvent, UV, HP Latex Grams inokuba yi-100g, 110g, 120g, 140g, 160g, 170g NON PVC, enokuphinda isebenze, engenamthungo
Isithsaba seCarbon Fibre yokuSonga imoto i-vinyl sticker 2D 3D 4D 5D 6D
Ifilimu ekhethekileyo ye-carbon fiber-dimensional carbon fiber, eyenziwe ngefayibha ephezulu ye-PVC, ayizange iphele, le mveliso iyisitifiketi sokuphefumula, ukukhusela i-bubble. Izinto ezikhethiweyo zilula kumgangatho, zilungele ubunzima, zinamandla ekunyamezeleni kwaye kulula ukwakha. ikhetha inkqubo yendalo esingqongileyo ...
Shicilela ukugcinwa kwentloko
Iintloko zokuprinta kunokwenzeka ukuba zivimbele ii-orifices ngenxa yexesha lokuprinta elingafanelekanga, ukusetyenziswa okungafanelekanga kweinki, okanye ungasebenzisi ixesha elide kwenza ukuvalwa kwemilomo. Kuya kufuneka sisebenze kwangoko kakhulu, okukhokelela kwilahleko akufuneki kube njalo. Ukuprinta okuqhelekileyo, kodwa ukunqongophala kombala, okanye phantsi kwendlela ephezulu ...
Ukubaluleka kokuprintwa komgangatho kwishishini
Ukuprinta kuye kwafikeleleka ngakumbi kuluntu ngokubanzi kule minyaka idlulileyo, ngokuprinta nokuba kunokwenzeka ngokuthe ngqo kwii-smartphones zangoku. Ngelixa ukushicilela ekhaya kunokuba kwanele ukuzisebenzisela ubuqu, ngumdlalo webhola owahlukileyo kubantu abasebenzisa iinkonzo zokuprinta ukuthengisa ishishini labo. Ibhasi ...
Yintoni ukuprintwa kwe-UV?
ngomphathi ku 20-12-13
Uyintoni umahluko phakathi kweenkampani zoyilo lwebranti kunye neearhente zentengiso
Yintoni UV Printing